Filoha lefitry ny SMM : “Efa any amin’ny fampanoavana ny “Raharaha Andriamandavy”” | NewsMada
Filoha lefitry ny SMM : “Efa any amin’ny fampanoavana ny “Raharaha Andriamandavy””
“Naninona nitory izahay mpitsara, nihitsoka ny antontan-taratasy? Fitoriana ny fandehan’izany antontan-taratasy izany no noresahina tamin’ny minisitra. Handeha ny famotorana, ary hiroso ny fanolorana amin’ny fampanoavana toy ny olona rehetra.”
Izay ny fanazavan’ny filoha lefitry ny Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM), Jaona Clément, ny faran’ny herinandro teo, momba ny “Raharaha Andriamandavy VII Riana”.
Tratra ambodiomby ny zavatra nataon’Andriamandavy VII Riana, raha ny fahatan’ny SMM azy. Tsy tokony hisy mihitsy izany ny fangatahana ny zo tsy azo enjehina. Rehefa fahatrarana ambodiomby izy, tsy mitaky ny fakana ny tombon-jon’ny mpikambana ao amin’ny parlemanta.
“Efa lasa any amin’ny fampanoavana ny antontan-taratasy, samy manara-maso an’iny na izahay na ny minisitera. Tsy voasariky ny mpitsara izahay amin’izay fanaraha-maso izay. Tsy hanao fanelanelanana amin’izany izahay”, hoy izy.
Misy roa ny fitoriana
Fantatra fa nihitsoka teo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana ny fitorian’ny SMM momba ny “Raharaha Andriamandavy VII Riana“, taorian’ny nametrahana izany. Teo ny fitoriana teny amin’ny borigadin’ny zandary momba ny fikarohana, Fiadanana, amin’ny fandrohanana ho faty natao tamin’ny mpikamban’ny SMM, tamin’ny alalan’ny facebook. Teo koa ny fitorahana ny foiben’ny Bianco, Ambohibao, taorian’ny andro nisamborana an-dRazaimamonjy Claudine, ny 4 avrily 2017.
Eo hatrany ny ahiahy…
Na eo eo aza izany rehetra izany, tsy ilaozan’ny ahiahy. Tsy inona fa ny mety mbola ho fitsabahan’ny fahefana mpanatanteraka ny raharaham-pitsarana. Anisan’ny takin’ny SMM ny fanajana ny hasin’ny fitsarana, ny tsy fanaovana fitaovana politika ny fitsarana, ny fanajana ny didim-pitsarana, ny fanajana ny tany tan-dalàna…
Saika ny mpitondra na olom-panjakana no tsy tan-dalàna, manome ohatra ratsy ho an’ny olom-pirenena tsotra? Anisan’ny tsy atokisan’ny vahoaka ny fitsarana sy ny mpitondra izany.